Ungayibhala Kanjani I-Blog Post
Izinyathelo Ezi-10 Zokubhala I-Blog Ephumelelayo
ULwesibili, May 17, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lokhu kungabonakala njengokuthunyelwe okuyisisekelo… kepha uzomangala ukuthi bangaki abantu abangibuza iseluleko sokuthi ungabhala kanjani okuthunyelwe okuhle kwebhulogi. Ngingeza futhi ukuthi kwesinye isikhathi ngidideka kakhulu lapho ngifunda okunye okuthunyelwe ukuthi yayiyini inhloso, ukubaluleka kwakuyini, futhi uma i-blogger yaze yacabanga ngomfundi njengoba ebhala okuthunyelwe.
Iyini umqondo ophakathi kokuthunyelwe? Ingabe ikhona impendulo ozama ukuyinikeza embuzweni othile? Musa ukudida abantu ngokuhlanganisa imibono engafani kokuthunyelwe okukodwa kwebhulogi. Ingabe isihloko siyaphawuleka? Okuqukethwe okumangazayo kusatshalaliswa ezinkundleni zokuxhumana futhi kungadonsela abafundi abaningi. Nquma hlobo luni lokuthunyelwe uzobhala.
Ini Amagama angukhiye ungakhomba ngokuthunyelwe kwakho kwebhulogi? Iqiniso liyatshelwa, angibheki njalo amagama angukhiye engingawaqhakambisa lapho ngibhuloga, kepha kuyindlela enhle yokuthola abafundi abasha. Ungafaki ithani lamagama asemqoka kokuthunyelwe kwebhulogi okukodwa… kulungile ukugxila kumagama ahlobene ambalwa.
Sebenzisa amagama angukhiye esihlokweni sakho seposi, amagama okuqala eposi lakho, namagama okuqala akho incazelo meta. Amagama abalulekile wokugqamisa noma ukuwasebenzisa ezihlokweni ezingaphansi, nokuwafafaza kokuthunyelwe kwakho kungenza umehluko omkhulu ekutheni okuthunyelwe kwakho kukhonjiswe kanjani ngezinjini zokusesha.
Akhona okunye okuthunyelwe kwebhulogi ungabheka lapho ubhala okuthunyelwe kwakho kwamanje? Ukuxhumanisa ngaphakathi kokunye okuthunyelwe kungasiza umfundi ukuthi angene ajule futhi avuselele okunye okuqukethwe okudala okubhalile. Ukuxhumanisa ngaphandle kungakhuthaza abanye abantu bemboni futhi kunikeze ifolishi elengeziwe ukuxhasa okuthunyelwe kwakho.
Ingabe ikhona i isithombe esimele ongayisebenzisa okushiya umbono kumfundi? Ubuchopho bethu abuwakhumbuli njalo amagama… kepha siyacubungula futhi siqophe izithombe kangcono kakhulu. Ukuthola isithombe esihle ukumela okuqukethwe kwakho kuzoshiya umbono omningi ngabafundi bakho. Ukungeza omunye umbhalo esithombeni kungasiza nge SEO. (Futhi uma isithombe sibiza amagama ayinkulungwane… an infographic ibiza i-100,000 ne-a ividiyo ibiza isigidi!)
Ungakubhala yini okuqukethwe usebenzisa amaphuzu wezinhlamvu? Abantu abafundi okuthunyelwe kwebhulogi njengoba nje bekuskena. Kusetshenziswa amaphuzu amachashazi, izigaba ezimfushane, izihlokwana, namagama asemqoka abhalwe ngokugqamile kungasiza abantu ukuskena okuthunyelwe futhi banqume kalula ukuthi bafisa ukungena ekujuleni noma cha.
Ufuna abantu benzeni do ngemuva kokufunda okuthunyelwe? Uma une-blog yezinkampani, mhlawumbe ukubamemela ukuboniswa noma ukukushayela. Uma kungukushicilelwa okunjengalokhu, mhlawumbe kungukufunda okuthunyelwe okwengeziwe esihlokweni noma ukukuphakamisa kumanethiwekhi abo. (Zizwe ukhululekile ukushaya izinkinobho ze-Retweet and Like ngenhla!)
Isikhathi eside kangakanani kufanele ngabe okuthunyelwe yibhulogi yakho kufanele kube? Inqobo nje uma kuthatha ukuveza iphuzu lakho - kungabe kusaba njalo. Ngivame ukubukeza engikuthumele bese ngithola ukuthi ngichichime kancane esihlokweni - ngakho-ke ngizozihlanza futhi ngisike zonke izinto ezingaphandle kwazo. Okuthunyelwe okudume kakhulu engikubhalile kwakungu-200 Blog Post Ideas… kwakukude, kepha kwasebenza! Uma ngibhala izigaba, ngijwayela ukulugcina ngedlanzana lezigaba ezimfushane - umusho owodwa noma emibili. Futhi, ukwenza okuqukethwe kugayeke kalula kuyisihluthulelo.
Maka futhi uhlukanise okuthunyelwe kwakho ngamagama asemqoka ongathanda ukuthi izethameli zithole okuqukethwe ngaphansi kwazo. Ukumaka nokuhlukanisa ngezigaba kungasiza wena nabafundi bakho ukuthi nithole okuqukethwe kulula lapho behlwaya isiza sakho ngesihloko esithile. Kungasiza futhi ukuhlela okuqukethwe okwengeziwe okufana ne- okuthunyelwe okuhlobene.
Khombisa ubuntu obuthile futhi nikeza umbono wakho. Abafundi ababheki ngaso sonke isikhathi ukuthola izimpendulo nje kokuthunyelwe, futhi bafuna ukuthola imibono yabantu ngempendulo. Impikiswano ingaqhuba ukufundwa okuningi… kepha yiba nobulungiswa futhi uhloniphe. Ngiyakuthanda ukuphikisana nabantu kubhulogi yami… kepha ngihlala ngizama ukukugcina kusihloko esiseduze, ngaphandle kokubizana ngamagama noma ukubukeka njengembongolo.
Ingabe Imidiya Yezokuxhumana iyiqhinga le-SEO?
Yabelana ngokuqukethwe kwakho nomphakathi webhizinisi
May 18, 2011 ku-12: 59 AM
I-athikili emangalisayo exoxa ngohlangothi lobuchwepheshe bokubhala nokuthumela ibhulogi. Imininingwane emikhulu yokuyibuyekeza NGAPHAMBI kokuthumela ibhulogi yakho elandelayo.
May 25, 2011 ku-12: 51 PM
Uma sikala iposi ngalokho esikususa kokuthunyelwe lokhu okuthunyelwe kufinyelela phezulu. Okuthunyelwe uqobo kuyisibonelo sokuthunyelwe. Isibonelo, amanye ama- # 4 amanye ama-blog - yini ayi-10 kokuthunyelwe? Ngiyabonga.
Vic @ Blog Amathiphu Ebhizinisi
Nov 11, 2011 ngo-9: 54 AM
Isithombe esihle esimele kahle okuthunyelwe kwebhulogi kuyindlela enhle yokwandisa okuthunyelwe kwethu kwebhulogi. Isiza abafundi baqonde kabanzi noma yikuphi ukubhala ngokumane ubanikeze umyalezo ngesithombe uqobo.
Nov 11, 2011 ngo-10: 37 AM
Ngiyabonga uDoug. Akukaze kube ngumqondo omubi ukubuyela kuzisekelo zokuthi ubhala kanjani okuthunyelwe okuhle. Ngenhlanhla ipulatifomu engiyisebenzisayo (i-Compendium) iyangisiza ekungiqondiseni nasekungixhaseni kulezi zinyathelo eziningi, kepha isinyathelo sakho sokuqala siyiqiniso futhi inselele yami enkulu lapho ngizama ukubhala okuthunyelwe okuhle. Kuyahlekisa ukuthi uxhumanise okuthunyelwe kwemibono yakho yokuqukethwe engama-200 njengesibonelo seposi elide. Yinde, kepha igayeka kalula futhi izosiza abantu ukuthi basebenzise ezinye zezinyathelo ozibala lapha. Ngiyethemba abafundi bakho bazosihlola leso sixhumanisi!
Nov 11, 2011 ngo-10: 50 AM
Sawubona Brian! Siyabonga ngokuma futhi ubeke amazwana - ngiyethemba konke kuhamba kahle!
Nov 12, 2011 ngo-2: 26 PM
Ngiyabonga uDoug ngazo zonke izeluleko. Ngimusha emhlabeni webhulogi futhi ngikuthole kunzima ukuthola iphuzu lami ngokucacile nangempumelelo. Nakanjani ngizosebenzisa lezi zeluleko kuma-blog ami azayo.
Nov 12, 2011 ngo-3: 54 PM
Kuhle, Napolean! Sazise uma unemibuzo.
Dec 27, 2011 ngo-6: 29 PM
Angikaze ngifunde noma ngithumele kubhulogi, ngakho-ke le bekuyindatshana ephelele! Siyabonga ngokuchaza izisekelo ngendlela eqondakala kakhulu.
Okulandelayo, ngidinga ukufunda ukuthi “Ngiyayisayina yini le nto, futhi kwenzekani uma ngichofoza u-“ Post as… ”?
Ngicabanga ukuthi sengizothola!
I-BTW, ngaziwa njengeCharacterMaker.